Hifarana ny CES ary ankehitriny dia manakaiky ny Kongresy Iraisam-pirenena Momba ny Finday any Barcelona 2017. Vaovao momba ny gadget
Hifarana ny CES ary ankehitriny manakaiky ny Kongresin'ny World Mobile of Barcelona 2017
Tamin'ity taona ity tao amin'ny CES any Las Vegas izahay dia nahita vokatra teknolojia vitsivitsy ary tena mahaliana tokoa ny sasany aminy. Nifantoka indrindra tamin'ny fitaovana finday izay somary vitsy no naseho izahay ary vokatra mifandraika amin'ny Internet momba ny zavatra, izany hoe, vata fampangatsiahana maranitra, milina fanasan-damba, fanadiovan-drivotra, mpandahateny, robot, mpanampy ary trano vitsivitsy sy vokatra sci-fi be dia be izay mifandray tanteraka miampy drôna mahafinaritra. Tamin'ity taona ity ny vaovao momba ny fanitarana an'i Xiaomi manerantany dia antenaina ihany koa satria izy no taona voalohany tao amin'ny CES, saingy tsy nisy zavatra hafa lavitra noho ny zava-misy ary ny hany nasehon'izy ireo ho zava-baovao dia ny Xiaomi Mi Mix vaovao amin'ny seramika sy loko fotsy.
Fa ny zavatra tsara rehetra dia vita ary anio no andro farany amin'ity hetsika atao any Las Vegas ity ary ankehitriny dia kely kokoa ny manomboka ny hetsika hafa amin'ny fiandohan'ny taona izay andrasan'ny maro amintsika satria nanampy betsaka hafa izy ireo vaovao momba ny finday smartphone sy fitaovana "tena izy" marobe izay azontsika jerena sy kitihina mandritra ity taona ity. Ny vaovao ratsy dia amin'ity MWC 2017 ity dia toa tsy hanana fampisehoana roa amin'ireo lehibe indrindra isika ary ambonin'izany rehetra izany Samsung, izay taorian'ny zava-drehetra nitranga tamin'ny Galaxy Note 7 -n'izy ireo. Tsy hanolotra ny maodely Samsung Galaxy S8 vaovao any Barcelona izy.
Na izany na tsy izany, ny MWC no hetsika manandanja indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny sehatra misy azy, izay mampivondrona ireo orinasa lehibe sy matihanina amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra any Barcelona. Hatramin'ny 2006, Barcelona no nampiantrano ny hetsika ary, nandritra ny efatra andro, indray mandeha isan-taona, dia izy no nanjary fampisehoana lehibe indrindra ho an'ny teknolojia finday eto an-tany. Tamin'ny andiany farany tamin'ny 2016, matihanina maherin'ny 100.000 - anisan'izany ireo mpitantana 4.500 avy amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatra manerantany - nianatra momba ny fanavaozana farany momba ny vahaolana finday, natolotry ny mpampiranty iraisam-pirenena maherin'ny 2.200, mpanao gazety sy mpandalina 3.800 manerantany no nitantara ny zava-nitranga, nitatitra ny zava-nitranga rehetra tamin'ny fampirantiana sy fandraisam-bahiny 94.000 metatra toradroa.
Amin'ity taona ity isika dia manantena vaovao lehibe manan-danja ary izany no antony itiavantsika ny hahatongavan'ny datin'ny fanombohan'ny Kongresin'ny World Mobile GSMA. Ankalazaina ny MWC ny 27 febroary hatramin'ny 2 martsa ao amin'ny kianja Fira de Barcelona Gran Via.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Events » Hifarana ny CES ary ankehitriny manakaiky ny Kongresin'ny World Mobile of Barcelona 2017
Samsung dia nivarotra Gear VR 5 tapitrisa